အိသာ ကရိနီသည် အင်မတန်တောက်ပသည့် ဟိုက်ပါဂျိုင်းယန့်ကြယ်တစ်စင်းဖြစ်သည်။ ခန်းမှန်းခြေ ထုထည်မှာ နေထက် အဆပေါင်း ၁ဝဝ မှ ၁၅ဝ ထိကြီးမားကာ တောက်ပမှုမှာလည်း နေထက် အဆပေါင်း လေးသိန်းခန့် ပိုမိုတောက်ပသည်။ ယင်းအရာဝတ္ထုသည် အသေးစိတ်လေ့လာနိုင်သော အကြီးမားဆုံး ကြယ်တစ်စင်းဖြစ်သည်။ အခြားသော ကြယ်များမှာ ပိုမိုတောက်ပ၊ ကြီးမားနိုင်သော်လည်း သူတို့၏ အချက်အလက်များမှာ သိနိုင်ရန် အလှမ်းဝေးကွာလွန်းသည်။ နေထက် အဆပေါင်း ၈ဝ ပိုကြီးသောကြယ်များသည် နေထက် တောက်ပမှု အဆပေါင်းသိန်းချီကာထုတ်ပေးသည်။ ယင်းတို့သည် ရှားပါးလှသည်၊ ဂယ်လက်ဆီထဲတွင် ဒါဇင်အနည်းငယ်ခန့်သာ တည်ရှိကြသည်။ သာမန် ကြယ်တစ်စင်းထက် အဆပေါင်း ၁၂ဝ ပိုကြီးပါက ယင်းကြယ်အမျိုးအစားသည် မဝေးကွာသည့် အနာဂါတ်တွင် ဆူပါနိုဗာ သို့မဟုတ် ဟိုက်ပါနိုဗာအဖြစ်မျိုး ဖြစ်တန်ခြေရှိလေသည်။ အိသာ ကရိနီ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် နက်ဗျူလာအား တိုက်ရိုက်မြင်နိုင်စေသည်။ ၁၈၄ဝ ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော Great Eruption မတိုင်ခင်ကမူ နက်ဗျူလာတစ်ခုလုံးသည် တမျိုးတဖုံ များစွာ ကွဲပြားနေခဲ့ပါလိမ့်မည်။
Object Data – NGC 3372။ The NGC/IC Project။ 12 May 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2008-04-25 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
NGC 3372 - The Eta Carinae Nebula။ Atlas of the Universe။ 2013-10-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
NGC 3372။ SIMBAD။ Centre de données astronomiques de Strasbourg။ 2013-09-03 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
O'Meara၊ S. J. (2002)။ The Caldwell Objects။ Cambridge University Press။ pp. 361–369။ ISBN 0-521-82796-5။
"One Picture, Many Stories"။ 13 February 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Kepple; et al. (2008)။ The Night Sky Observer's Guide။ Vol. 3။ Willman Bell, Inc.။ p. 52။ ISBN 9780943396897။
Results for NGC 3324။ 28 May 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 May 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
NGC 3324။ 17 May 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။